ဘုန်းကျော်: မိုင်းသင်တန်း ၆-လ
It's good, great. နည်းပညာနှင့် ကြိုးစာ အာထုတ်မှု့ ကို အားကျမိပါသည်၊ အရာရာအောင်မြင်ပါစေ။ ။
could you give me your school's address? I'm finding and it come out lots of TAFE all the whole Australia.
could you give me your class's website? when i find , it come out TAFE all the whole Ausitria.